Musangano Wako Wepamhepo Unotevera Uripi | Martech Zone
Muvhuro, April 26, 2010 Chitatu, November 5, 2014 Douglas Karr
Mamwe emakambani andiri kushanda nawo, kunyanya bhizinesi kuenda kubhizinesi (B2B) ari kuona mhedzisiro inoshamisa uye anodzoka mukudyara nekushandisa kwezviitiko chaizvo uye tradeshows. Ndanga ndichida kutumira nezve chaiyo chiitiko kushambadza kwenguva yakati rebei, uye nguva pfupi yadarika ndakazotaura nayo Kusaruramisira, Chiitiko chinotungamira chaicho, chaicho tradeshow uye online basa rakanaka mupi online.
Kusaruramisira kunopa yakazara Software sePuratifomu yebasa, kusanganisira software yemusangano, webcasting software, online chat, kutungamira kuunganidza uye maturusi ekuzivisa. Kusiyana nemusangano wechinyakare uko kwakaoma kuteedzera vanenge varipo, musangano chaiwo unokubvumira kuteedzera zvese! Pamusoro pekudhura pamutepfenyuro wekutungamira, makambani mazhinji ari kutora misangano chaiyo kuti ive inochengetedza nharaunda zvakare.
Mune imwe ongororo kutanga kwegore rino, Kusarongeka kwakawana 48 muzana yevatengesi vari kuronga kuwedzera kushandiswa kwavo kwezviitiko zvegore rinouya. Zvikonzero zvinozivikanwa kwazvo zvekutora zviitiko zvechokwadi ndezvekuti wedzera kushambadzira kusvika (32 muzana) uye wedzera lead volume (15 muzana).
American Bhizinesi Media yakashuma kuti makumi manomwe neshanu muzana evatongi vezvebhizinesi vakaongororwa vakati vakapinda zviitiko zvitatu kana kupfuura zveWebhu mukati memwedzi gumi nembiri yapfuura. Kushambadzira Sherpa akataura kuti misangano chaiyo yakawedzera 75% semubatsiri wezve ruzivo mukati mehafu yekutanga ya12. Mabhajeti akaomarara ekufamba, kuputika kwenzvimbo dzekutsvaga pamwe nekutsvaga zvishandiso zvitsva zvechizvarwa zvakatungamira kukurudzira kukura kwakakurumidza uku.
Ariba ndeimwe yeUnisfair's nhau dzinokubudirira. Ariba ikambani yevatungamiriri yepasirese iyo yakaziva kuti hupfumi hwaizokanganisa vanhu vanoenda kumusangano wavo unotevera. Vachishandisa chikuva cheUnisfair, vakafambisa musangano wavo wepanyama pamhepo uye vakabatsirwa zvakanyanya, zvichikonzera vanhu vanyoresa vanosvika 2,900 1,618, vakapinda 4,000, kudhanilodha zviuru zvina, kushanya kwematumba mazana mashanu nemazana maviri, makumi mashanu emitauro yakatangwa uye mameseji 5,200! Ndiko kumwe kubatanidzwa kwakanaka!
3 Matipi e Virtual Chiitiko Kushambadzira
Joerg Rathenberg, director mukuru wekushambadzira weUnisfair, akapa matipi anotevera ekushambadzira kwechiitiko chaiko:
Chiitiko chisati chaitika: Kutanga kugadzirira kutanga, sezvaungaita kumusangano wepanyama kana chiitiko. Ita shuwa kuti iwe une ruzha rwevateereri chirongwa chekugadzira. Iva nehunyanzvi uye edza kuita kuti ruzivo rwacho ruve rwekubata sezvinobvira. Semuenzaniso, tumira mapakeji echiitiko aine zvemusangano musangano eg t-shirts kune vanyoresa kana iwe uchibhadharisa chiitiko. Ipa zvikorekedzo zvemasocial network izvo zvinobvumidza vanyoresa kunogovana kukoka kunharaunda dzavo Ive neshuwa yekuisa inonakidza zvemukati nevatauri vanogona kukwevera boka. Zvemukati zvakanaka ndiyo kiyi yechiitiko chakabudirira! Ita shuwa kuti vanyoresa vane nguva yekutanga pamarenda avo ekuona.
Panguva yechiitiko: Chunk zvikamu zvako muzvidimbu zvidiki - panguva dzezviitiko chaizvo, vanhu havana kutarisisa kwakaenzana sevanopinda mumuviri. Takaona kuti makumi maviri emaminiti ndiyo yakanyanya kureba. Ita shuwa kuti maspika ako anowanikwa ekukurukura munzvimbo yekutandarira. Ipa yakawanda mikana yekudyidzana, network uye kubatana. Revera mapota uye pasocial media kusangana kuti ugadzire buzz uye kutora tembiricha yechiitiko chako. Real-nguva mishumo inokuudza izvo zviri kuitika. Shandisa mameseji kuendesa vanhu kune iko iko kuita. Ipa zvinokurudzira kune vanopinda kuti vaite, senge makwikwi kana madhirowa.
Mushure mechiitiko ichi: Zviitiko zve Virtual zviri kukurumidza kukura kuita zvinogara zviripo-papuratifomu yekubatana. Zvese zvemukati zvemukati, zvinosanganisira Q&A, zvinofanirwa kunge zvichingowanikwa ipapo-kudiwa chaipo mushure mekunge chikamu chehupenyu chapera. Kazhinji vanenge 50% yevanyoresa vanoratidzira vararame. Ita shuwa kuti iwe unowana imwe 50% yekuendawo zvakare - ingori gare gare. Shandisa zvishandiso zvakadai seUnisfair's Engagement Index yekumisikidza vateereri vako zvichienderana nehuwandu hwavo, zviitiko uye zvavanofarira uye nekupa ruzivo urwu kuchikwata chako kuti vatevere. Zviitiko zvechokwadi zvine bhenefiti yekuti iwe uchazoziva zvese zvakaitwa nemupindi paanenge ari munharaunda yako. Ipa zvese izvi zvakapfuma ruzivo kune rako rekutengesa timu kuti uve nechokwadi chekuti vanogona kuenderera nehurukuro.
Vamwe vamwe vatambi mumusika vari InXpo, ON24, Zviratidzo2, Nzvimbo Yechipiri uye 6Connex. Ini handina kugadzirira kusiya zviitiko zvemuviri parizvino - ini ndinowana kukosha kwakanyanya mukubatana nevamwe varipo. Sezvo mutengo wemusangano unogona kutanga pa $ 50k, zvakadaro, musangano chaiwo unofanirwa. Uri kukwezva vanhu vazhinji kwazvo vane tarisiro huru asi vari kudzivirira mutengo kana kukanganiswa kwekufamba.
Tags: Chiitiko Kurongazviitikoonline conferencekusaruramisira